Vatakely feno torohevitra ho an’ireo Mpandika teny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2019 6:46 GMT
SEO & Fitaovan'ny Tambajotra Sosialy
Attracta: manisika ny laharan'ny tranonkala any anatin'ireo milna fikarohana, tsara ho an'ireo tranonkala Lingua vaovao.
Rapportive & Discover.ly mba hamakivakiana ny tranonkala sosialy izay mifandray amin'ny imailaky ny olona iray.
twXplorer & TweetDeck, izay fitaovana Twitter misintika ireo teny mifandraka amin'ireo valina fikarohana sy rohy malaza, ary afaka mandrakitra ireo valin'ny fikarohana ho an'ny fampiasana azy any aoriana.
Fametrahana dikanteny kely amin'ny lahatsary
Miaraka amin'ny Amara, afaka mandika sy manisy sary ny lahatsarinao amin'ny fomba tsotra ianao, miaraka amin'ny fanampian'ireo mpijerinao. Jereo ny torolalanay amin'ny Fampiasana ny Amara Mba Hametrahana dikanteny kely Amin'ny Lahatsary.
Miaraka amin'ny DotSub afaka ataonao ny mijery lahatsary misy dikanteny amin'ny teninao, mampiakatra ny lahatsarinao, mamorona ireo dikanteninao manokana.
Transifex: Nanomboka toy ny sehatra fandikanteny ho an'ny tontolon'ny loharano misokatra, nitombo ka lasa sehatra sangany manerantany ny Transifex, amin'ny fijerena toerana amin'ireo vokatra rindrambaiko .
Rakibolana sy voambolana manokana
Linguee Rakibolana sy Fitaovana Fikarohana Fandikanteny [de] [es] [en] [fr] [pt]
Glosbe Ilay rakibolana an-tambajotra sy amin'ny fiteny maro
Grammarly:Milaza aminao rehefa misy hadisoana amin'ny fitsipi-panoratana
Fitaovana hafa fandikanteny
CrossCheck Fampiharana cloud maimaimpoana izay hijerena haingana ny kalitaon'ireo failon-dahatsoratra amin'ny fiteny roa.
Lexilogos angona feno fitaovana ho an'ny fianarana ny fiteny manerana izao tontolo izao
LabSpace fampianarana maimaimpoana eo ambany fitantanan'ny Open University any Royaume-Uni.
OpenLearn Tranonkala anome fidirana malalaka amin'ireo fitaovana ilaina amin'ireo fampianarana ao amin'ny Open University
EmailCollege fampianarana kely manome fampidirana lalina amin'ireo lohahevitra mahaliana, manome ny torohevitra farany indrindra ilaina sy vao haingana ary manome ireo fitaovana ilainao mba hahombiazana sy handroso.
ALISON Manome fampianarana sy fampiofanana maimaimpoana sy iarahana mianatra ary tsy miankina mikasika ny multimedia.
WeSpeke | Mianara sy manazàra tena maimaimpoana amin'ny fiteny maro.
BlogTrottr Manome RSS maimaimpoana sy tolotra imailaka.
Forvo.com Toerana tsara hijerena ireo famakianteny ataon'ireo tena mpampiasa azy.
Raha manana fitaovana misimisy kokoa ianao, mba lazao ao amin'ny fanehoankevitra izany!